दुदिलाभाटीका मगर युवाहरु पञ्चेबाजा बजाएर मनग्गे आम्दानी गर्दै ! – ebaglung.com
दुदिलाभाटीका मगर युवाहरु पञ्चेबाजा बजाएर मनग्गे आम्दानी गर्दै !
२०७३ पुष २४, आईतवार २१:३७	Top News, थप समाचार
गुमानसिँह भण्डारी, गल्कोट २०७३ पुस २४ । परम्परागत रुपमा दर्जी समुदायले बजाउँदै आएको नौमती पञ्चे बाजा लोप हुँदै गएपछि गल्कोट दुदिलाभाटीका मगर युवाहरुले त्यसको संरक्षणमा जुटेका छन् । दमाई समुदायका बृद्धहरुले मात्र यो पेशा गर्दै आएको तर युवाहरुले यसतर्फ ध्यान नदिदा लोप हुने अवस्था देखेपछि मगर युवाहरुले यसको संरक्षणमा ध्यान दिएका हुन् ।
दुदिलाभाटी गाविस वडा नं. १ का मगर युवाहरुको सहभागितामा मगर बाजा समुह गठन गरी पञ्चेबाजालाई व्यवसायिक रुपमा समेत प्रयोगमा ल्याएका छन् ।
गाउँ घरमा हुने विवाह, ब्रतबन्धदेखि लिएर अन्य कार्यक्रमहरुमा समेत पञ्चेबाजाको माग हुने गरेको भएपनि दमाई समुदायले यो पेशालाई व्यवसायीक रुपमा अगाडि बढाउँन नसक्दा आफुहरु यसतर्फ लागेको चौराह मगरबाजा समुहका संरक्षक बमबहादुर श्रीसले बताए । गत बर्षको माघ १ गतदेखि चौराह बाजा समुह गठन गरि बाजा बजाउन सुरु गरेपछि स्थानियलाई सहज भएको उनको भनाई छ ।
पहिले दलितहरुले मात्र बजाउने भएकाले उनिहरुको माग अनुसारको रकम दिनुपथ्र्यो अहिले सजिलो भएको स्थानियको भनाइ छ ।
मगर युवाहरुले बाजा बजाउन थालेपछि गाउघरमा बिवाह, बतब्रध गर्न सजिलो भएको श्रीसको भनाई छ । सुरु सुरुमा निशुल्क रुपमा बजाउने गरेका उनिहरुले अहिले भने स्थानियले केहि रकम दिने गरेको बताउछन । हालसम्म उनिहरुले करिब २ लाखभन्दा बढि संकलन गरिसकेका छन् ।
हामीले यति दिनुपर्छ भनेर भन्दैनौ । आफुखुसी १० हजार देखि १२ हजार सम्म दिन्छन् संरक्षक श्रीसले ईबागलुङसंग भने गत बर्षदेखि सुरु गरिएको यो अभियानलाई पुस्तौ पुस्ता सम्म संरक्षण गर्दै लैजान्छौँ ।
सूचना लुकाएर राणा शासनको व्यवहार नगर्न प्रमुख आयुक्त बाँस्कोटाको आग्रह !